Accueil > Gazetin'ny nosy > Arsène Rakotoarisoa: Tsy ho afa-bela amin’ny raharaham-bolan’ny Kraoma
Arsène Rakotoarisoa: Tsy ho afa-bela amin’ny raharaham-bolan’ny Kraoma
Nivoaka tampoka ny vaovao fa taorian’ny nanefana ny vola takalon’ainan’ireo efa-dahy mpiasan’ny Kraoma izay niharan’ny fakana an-keriny (50 tapitrisa sa 100 tapitrisa ariary) izay voalaza fa avy amin’ny orin’asa Kraoma, dia nametra-pialana ny tale jeneralin’ity orin’asa ity, Ingahy Rakotoarisoa Arsène.
Ny fantatra aloha dia isan’ny sehatra ivoahan’ny loharanom-bola ilalaovan’ny Hvm pôlitika maloto ny eo anivon’ny orin’asa Kraoma. Ka izany no mahatonga anay ho nanamarika hoe “raha mametra-pialana ve ny tale jeneraly ao dia ho afa-maina, tsy misy arakaraka?”
Ny minisitry ny Harena ankibon’ny tany izay miahy mivantana ny asan’ny orin’asa Kraoma moa dia tsy hafa fa Ingahy Henry Rabary Njaka, ary ny filoha nasionalin’ny antoko Hvm (na vao nanao sinema aza fa nametra-pialana amin’ny maha-filoha nasionalin’ny Hvm azy) dia i Rivo Rakotovao. Dia hahagaga ve raha misy, noho izany ny talapetraky ny mpiaotra eo amin’ny Hvm sy ny Kraoma?
Miantefa avy hatrany any amin’ireo solombavambahoaka izay nampindramin’ny vahoaka ny fahefana amin’ny fanaraha-maso ny asan’ny governemanta izahay amin’izao raharahan’ny orin’asa Kraoma izao. Orin’asam-panjakana ny Kraoma mantsy. Iray amin’ireo orin’asa eo ambany fitantanan’ny fitondram-panjakana na manana sata manokana aza. Manana andraikitra hanara-maso ny momba an’io orin’asa io ny depiote, ka ahoana? Mbola hanararaotra faramparany koa ve ny solombava isany amin’ny fandraisana “kolikoly avo lenta” ka hanao sarintsarina fanadihadiana, raha hanao, amin’io orin’asa Kraoma io, sa mba hanarina ny laza ratsy nanenika an’i Madagasikara ka hatrany ampitan’ny ranomasina any?
Fa na hanao ny solombava na tsy hanao fanadihadiana, manana andraikitra koa ny Bianco sy ny fitsarana hanetsi-tena hampanao famotorana momba ny fitantanana an’ity orin’asa ity. Hanam-piniavana sy hanolo-tena ho amin’izany koa ve sa hiandry sy hihodinkodina eo fotsiny?
Aza hadinoina fa sady filohan’ny filankevi-pitondrana (Président du conseil d’administration) no tale jeneralin’ny Kraoma i Arsène Rakotoarisoa. Izany hoe malalaka kokoa izany ny sehatra ilalaovana sy itavanana ary hanaovana ilay ambara matetika hoe “sady mandidy no homana” ao amin’ity orin’asa ity!